octobre 2016 · déliremadagascar
Socio-eco	 31 octobre 2016 R Nirina
FITRANDRAHANA AO SOAMAHAMANINA: Tsy ao anatin’ireo mitokona ireo mampanofa ny tany.
Efa tsy eny an-toerana intsony ireo sinoa saika hitrandraka volamena ao Soamahamanina. Fitaovana vitsivitsy sisa no hita eny fa saika nampiakarana eto Antananarivo avokoa. Nitondra fikorontanana ho an’ny mponina ny Soamahamanina mihitsy ny fitrandrahana volamena saika ataon’ny orinasa sinoa JIUXING MINES. Araka ny fanazavan’ny tomponandrikitry ny serasera, Stella ANDRIAMAMONJY, miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny fitondrana ihany ny fitohizan’ny tetikasan’ireo sinoa. Hatreto aloha dia mbola manan-kery ny fahazoan-dalana azon’izy ireo. Manan-kery mandritra ny 40 taona izany. Naato izany ny fitrandrahana. Raha nidina teny an-toerana izahay, tany sy tanimboly an’olon-tsotra maromaro ny tafiditra ao anatin’ny toeram-pitrandrahana. Mirefy 10 ha eo no efa vita fifanarahana tamin’ny tompon-tany. Havaozina isan-taona ny fifanarahan’ ny roa tonta. Naneho ny heviny ny raim-pianakaviana iray anisany mampanofa ny tany amin’ny sinoa fa mahazo tombony kokoa ny tenany amin’ny fampanofana ny tany. Voly mangahazo mantsy no voleny. “Manodidina ny 300.000 Ariary isam-bolana eo no hofan’izany”. Ankoatra azy, nanamafy ihany koa i Martin RASOLOMANANA fa tsy anisan’ireo mitokona isaky ny alakamisy ireo tompon-tany. Nambarany fa ireo mpitokona ireo mihitsy no tena manakorontana. Aiza ve ka isaky ny tsena alakamisy mitokona foana? Raha tsy maintsy atao aza izany maninona raha amin’ny andro hafa? “Tao anatin’izay fotoana nisavorovoroana izay tokoa dia nihena ny fidiram-bolan’ireo mpivarotra satria vitsy ireo mponina no mandeha miantsena satria matahotra sakoroka”, hoy izy.
Ankoatra ny fitrandrahana, tetikasa ho fampandrosoana tanana maro no nifanarahan’ny orinasa sy tanana ao Soamahamanina. Nilaza ny lehiben’ny fokontany, Laurent RAKOTONIRINA fa efa nisy fifampiresahana tamin’ny orinasa ary noezahina nampahafantarina izany ny fokonolona.
Fiahiana ara-tsosialy toy ny fanamboaran-dalana, tobim-pahasalamana , sekoly…no efa voarakitra ao anatin’ny bokin’andraikitry ny orinasa. Ho laharam-pamehana ihany koa ireo mponina amin’ny fandraisana mpiasa. 900 isaky ny fokontany eo no horaisina raha tontosa soamantsara ny fitrandrahana volamena ao Soamahamanina.
Nandeha ny resaka fa voakasika ny ala tapia. Nohamarinin’ny tale teknikan’ny orinasa, Dany RASOLOMANANA fa tsy voakasika mihitsy ny ity farany na ny toerana misy an-dry mopera aza. Nohazavainy ihany koa fa voafehy tanteraka ny toerana manomboka any amin’ny toeram-pitrandrahana ka hatrany amin’ny fanivanana ny tany. Noho izany, tsy ahiana handoto ny rano na ny renirano amin’ny manodidina ireo akora ampiasaina amin’ny dingana lalovana rehetra.
S-F.P.M.A : En visite chez le staff et Président du FLM
La formule “Visite de courtoisie” a été dépassée par le respect de l’éthique et du rituel chrétien protestant qui a dominé la rencontre.
Le Sakaizan’ny Fiangonana Protestantra Malagasy Andafy (S-FPMA) a rendu visite au Rév. Dr Rakotonirina David, Président de la FLM à Andohalo, jeudi dernier. Continuer la lecture →
Tsy miombon-kevitra amin’izy ireo kosa anefa ny “ex-matafs” na “ex-marins” tao amy Tafika an-dranomasina malagasy, dia ireo Tantsambo tranainy izany. Malalaka ny tsirairay sy ny isam-batan’olona haneho ny heviny hoy izy ireo. Continuer la lecture →
Non classé	 19 octobre 2016 R Nirina
ONN-BNGRC: Ho raisina an-tanana ny reny sy ny zaza.
Mifampiankina tanteraka andraikitrin’ny sampandraharaha misahana ny loza voajanahary sy ny ateraky izany na BNGRC sy ny ONN izay miandraikitra ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Continuer la lecture →
Socio-eco	 11 octobre 2016 R Nirina
FAO-BNGRC : 330.000 ny mponina, tafalatsaka ao anatin’ny hanohanana
Vokatry ny fiovaovan’ny toetra andro, tsy ampy ny rotsakorana ka mahatonga hain-tany. Miatrika betsaka any amin’ny fambolena sy fiompiana izany. Ny faritra Atsimon’i Madagasikara no tena voakasika amin’izany ka ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny hanohanana ireo mponina. Continuer la lecture →
politique	 4 octobre 2016 Miora Razafy
René Rasolofo : Ampiharo ny velirano sy dina
Mila hajoro eto Madagasikara ny fanjakana tena mamaha ny hetahetam-bahoaka raha tiana ny hisian’ny fampandrosoana, hoy ny mpikamban’ny filankevitra ambon’ny tetezamita teo aloha René Rasolofo. Continuer la lecture →